Archdiocese of Mandalay blog: January 2014
(Fr. Canute U Lun Aung)
ဖါသာရ်ကညု ဦးလွန်းအောင်သည် (၁၉၃၆)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၈)ရက်နေ့တွင် ချောင်းရိုးရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးရင်အောင် ဒေါ်လှခင်တို့ဖြစ်သည်။ ချောင်းရိုးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၅၀)ပြည့်နှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ အခြေခံရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၁) ခုနှစ်တွင် စိန်အာလ်ဘက် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ငါးတန်းမှစ၍ ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၅၆) ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်ခဲ့သည်။(၁၉၅၇)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်သို့ အဦးဆုံး ၀င်ရောက်သော ကျောင်းသား (၈)ယောက်အနက် တစ်ယောက် ပါဝင်ဖြစ်သည်။ (၁၉၅၇)ခုနှင့် (၁၉၅၈)ခုတွင် အီတာလျံ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနှင့် တိုင်းရင်းသား ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးတို့ စတင် ဖွင့်လှစ်
ခဲ့သည်။ (၁၉၅၈)ခုနှစ်မှ (၁၉၆၄)ခုနှစ်အထိ အမေရိကန် ဂျေဇုအစ်ဂိုဏ်း ဘုန်းတော်ကြီးများ လက်အောက်တွင် ပညာသင်ယူပြီး (၁၉၆၄) ခုနှစ် ဧပြီလ (၈)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း၏ ရွှေရတုသဘင်၌ ရဟန်း သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဖွင့်လှစ်သော ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်၏ ကနဦး ရဟန်း (၆)ပါးအနက် တပါး အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ကလေးမြို့တွင် လက်ထောက်အဖြစ် အမှုထမ်းစဉ် ချင်းပြည်နယ် ဆိုက်ဇံရွာတွင် သုံးလတာ ချင်းစကား သင်ယူခဲ့ရသည်။(၁၉၆၅) ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဦးမြအောင်နှင့်အတူ တီးတိန်းမြို့မှာနေပြီး အကူအညီပေးခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးဘခင် လက်ထက် (၁၉၆၆)ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့အထိ လေးလတာမျှ ဖလန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပြီး မေလမှ စ၍ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ပြောင်းရွှေ့ကာ စာချပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ (၁၉၇၇)ခုနှစ်တွင် ကလေးမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။
ကလေးမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် လူငယ်များ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ အထွေထွေ ဗဟုသတရရှိရန်၊ နှစ်စဉ် လူငယ်ပွဲတော်ကို ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ဓမ္မဆရာများ၊ သာသနာ့အကျိုးဆောင်လူကြီးများ သင်တန်းကိုလည်း တစ်ရွာပြီးတစ်ရွာ နှစ်စဉ် အလှည့်ကျ ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ဓမ္မဆရာများနှင့်အတူ ကျေးရွာများကို ခရီးလှည်လည်ခြင်းဖြင့် ဘာသာတူများကို စိတ်ဓာတ် တက်ကြွစေပြီး ဘာသာမှု၌ ခိုင်မြဲစေခဲ့သည်။ ကလေးမြို့တွင် အုတ်ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၁)ခုနှစ် ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက်ဘုရားကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်သည်။ (၁၉၉၇)ခုနှစ်မှစ၍ မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဂိုဏ်းထောက် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ မန္တလေး စိန်ဂျိုးဇက် (လဖုန်း)အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော စိန်ပန်း၊ တံခွန်တိုင်မြို့ဟောင်းနှင့် စိန်ဂျွန်း ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ မန္တလေး သာသနာ အိမ်မြေယာ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လဖုန်းရပ်ကွက်တွင် လူနေတိုက်ခန်း လေးထပ်တိုက်တစ်လုံး၊ ဆောက်လုပ် ပြီးစီးခဲ့သည်။ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် မန္တလေး သာသနာအုပ်စုကောင်စီ၏ စာရင်းစစ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌ အဖြစ်၎င်း၊ မာရီယား တမန်တော်ကူရီယား၏ ၀ိညာဉ်လမ်းညွှန်အဖြစ်၎င်း၊ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ခု ဇွန်လမှစ၍ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားကျောင်း၏ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။
(Fr.Michacl Kyi Aung)
ဖါသာရ် မိုင်ကယ်ကြည်အောင်သည် (၁၉၄၁)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၅)ရက်နေ့တွင် ချောင်းရိုးရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးစံဖြူ ဒေါ်မေရီတို့ဖြစ်သည်။ ချောင်းရိုးရွာတွင် မူလတန်းပညာသင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၅၅)ခု မေလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ မေမြို့ စိန်အာလ်ဘက်ကျောင်းမှ (၁၀)တန်းအောင်ပြီး (၁၉၆၃)ခုတွင် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်၌ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၀)ခုနှစ် မေလ(၇)ရက်နေ့၌ ချောင်းရိုးရွာ ဆရာတော် အာလောရှက်ဦးဘခင်လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် ပထမဆုံး ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့တွင် တစ်နှစ်အမှုထမ်းရသည်။ ထိုနောက် ခမ်းပတ်ရွာတွင် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် (၆)နှစ် အမှုထမ်းပြီး (၁၉၇၇)ခုတွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ချင်းညောင်ပင်သာရွာတွင် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းသည်။ ချင်းညောင်ပင်သာရွာတွင် (၃)နှစ် အမှုထမ်းပြီးနောက် (၁၉၈၀)ခုတွင် ချောက်မြို့ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် (၁၉၈၄)ခုနှစ်အထိ အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၆.၉.၀၄)နေ့တွင် ချောက်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။
(Fr. John U Maung Nee)
ဖါသာရ် ဂျွန် ဦးမောင်နီသည် (၁၉၄၄)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ချောင်းဦးမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဆယ်- ဒေါ်အေးတင်တို့ ဖြစ်သည်။ ချောင်းဦးမြို့ အထက်တန်းကျောင်းတွင် မူလတန်းပညာ သင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၅၅) ခုနှစ်တွင် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ မေမြို့ စိန်အာလ်ဘက် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပဉ္စမတန်းမှ စတင် ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၆၂)ခုနှစ်တွင် ဟိုက်စကူး ဖိုင်နယ် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် လာတင်း ဘာသာရပ်ကို (၁၉၆၄)ခုနှစ် အထိ (၂)နှစ် သင်ယူခဲ့သည်။ (၁၉၆၄) ခုနှစ်မှ (၁၉၇၁)ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ အထိ ရန်ကုန်မြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ဆက်လက် ပညာ ဆည်းပူးခဲ့သည်။ (၁၉၇၁) ခု မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် ချောင်းဦးမြို့၌ မန္တလေးသာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးဘခင်၏ လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီး ချောင်းဦးတွင် (၃)လခန့် နေခဲ့သည်။ ထိုနောက် မြောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ် ဖလန်းမြို့ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည်။ ဖလန်းမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် (၁၉၇၁)ခု ဇူုလိုင်လမှ (၁၉၈၆) ခု အထိ ဖလန်းသာသနာနယ် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ စိန်ဂျိုးဇက် သီလရှင်အသင်းဂိုဏ်းကို ဖလန်းမြို့၌ (၁၉၇၃) ခုနှစ်တွင်
စတင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖလန်းမြို့တွင် မြေပြိုသဖြင့် နေရာ ရွှေ့ပြောင်း၍ အုတ်ဘုရားကျောင်းအသစ် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ (၁၉၇၉)ခု တွင် ဘုရားကျောင်း ကောင်းကြီးပေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ရွာသုံးရွာ ကက်သလစ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်း စေနိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၆) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ကာသီဒရယ် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်၎င်း၊ မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ် သာသနာ ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် ၄င်း၊ တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ မန္တလေးမြို့ ကာသီဒရယ် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် မန္တလေး ကက်သလစ်သာသနာလုံးဆိုင်ရာ အိမ်ယာမြေ ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကာသီဒရယ် ရွှေနှလုံးတော် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို သွတ်မိုးခဲ့သည်။ ကျောက်ပြားများ ခင်းခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ မန္တလေးမြို့ စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။ စိန်ဇေးဗီးယားတွင် ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။
(Fr.Peter U Hla Shwe)
ဖါသာရ် ပီတာ ဦးလှရွှေသည် ကျောက်ဆည်ခရိုင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ဇော်ဂျီရွာ၌ (၁၉၄၄)ခု မေလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဖိုးရုံ ဒေါ်ကြွေတို့ဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့ ဖါသာရ်လဖုံးကျောင်းတွင် (၅)တန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး နောက် (၁၉၅၆)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ မေမြို့ စိန်အာလ်ဘက် အထက်တန်းကျောင်းတွင် (၁၀) တန်းအထိ ပညာသင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၆၄)ခုမှ (၁၉၇၁)ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန်မြို့ ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၁) ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၄) ရက်နေ့တွင် နဘက်ရွာ၌ ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် အေဦးဘခင်၏ လက်တော်မှ ရဟန်း သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်း သိက္ခာခံယူပြီးနောက် (၁၉၇၁) ခုနှစ်မှ (၁၉၈၅)ခုနှစ် အထိ ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဆိုက်ဇံရွာ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် သာသနာတော်၏ အမှုတော်ကို ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၃) ခုနှစ်မှ (၁၉၈၅)အထိ တုံးဇံသာသနာနယ်ပါ ပူးတွဲ၍ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ (၁၉၈၅)ခု ဒီဇင်ဘာလတွင် မေမြို့အပြစ်မဲ့သန္ဓေယူသော သခင်မ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင်လည်း ၀ိညာဉ်လမ်းညွှန် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူရသည်။ အနီးစခမ်း ဆလေးရှင်း ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင်လည်း တစ်လ တကြိမ် အာပတ်ဖြေ နားတောင်ရသည်။
မေမြို့အပြစ်မဲ့ သန္ဓေယူသော သခင်မကျောင်းတွင် အမှုထမ်းစဉ် ဟောခန်းမ တဆောင် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ နာရေးအတွက် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်တစီး ထူထောင်ခဲ့သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို အုတ်တံတိုင်း ကာရံနိုင်ခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ၏ သင်္ချိုင်း ကော်မတီဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စ်ိန်အာလောရှက် သီလရှင်ဂိုဏ်းအတွက် ၀ိညာဉ်လမ်းညွှန်အဖြစ် တာဝန်ယူရသည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ မိတ္ထီလာမြို့ စိန်အန်ထော်နီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်ရသည်။
(Fr. George U San Min)
ဖါသာရ်ဂျော့ ဦးစံမင်းသည် (၁၉၄၃)ခု ဒီဇင်ဘာလ (၇)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးဘိုးဝင် ဒေါ်မာဂီ (ဒေါ်နှင်းရည်)တို့ ဖြစ်သည်။ (၁၉၅၈)ခု မေလ(၁၃)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၄) ခု မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် အာလောရှက် ဦးဘခင်လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် ချင်းတောင် မတူပီမြို့တွင် သာသနာအမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်စဉ် ဘုရားကျောင်း တစ်ဆောင်ကို အုတ်ဖြင့် အခိုင်အမာ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဖန် မြေပြန့်ဒေသဖြစ်သော ချောက်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ အမှုတော် ထမ်းရွက်သည်။ ချောက်မြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ရေနံချောင်း၊ မကွေး၊ မင်းဘူး၊ စကု၊ မလွန်မြို့ရှိ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။
ရေနံချောင်းတွင် ဘုရားကျောင်းကို ပေတစ်ထောင် ရှည်သော အုတ်တံတိုင်း အသစ် ကာရံနိုင်ခဲ့သည်။ ဓမ္မဆရာအတွက်နှစ်ခန်းတွဲ အိမ်တစ်လုံး ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးနေကျောင်းကို မွမ်းမံ ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ မကွေးမြို့ဘုရားကျောင်းကို အုတ်တံတိုင်း ကာရံနိုင်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ဇွန်လမှစ၍ မြင်းခြံမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။
(Fr.Alphonse U Ko Lay)
ဖါသာရ် အာလ်ဖုန်းစ် ဦးကိုလေးသည် (၁၉၄၂)ခု သြဂုတ်လ (၆)ရက်နေ့တွင် ချမ်းသာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဂျိုးဇက် ဒေါ်စောမြိုင်တို့ဖြစ်သည်။ မုံလှရွာတွင် ဒုတိယတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၅၃) ခုတွင် မန္တလေးမြို့ ဖါသာလဖုန်းကျောင်းတွင် သူငယ်တန်းမှ စ၍ ပညာသင်ကြားသည်။ (၁၉၅၆)ခုတွင် ပဉ္စမတန်းအောင်သည်။ (၁၉၅၆/၅၇) ခုနှစ်တွင် အနီးစခမ်းရှိ နာဇရက် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားရာ(၁၉၆၁) ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်းအောင်သည်။ (၁၉၆၁) ဧပြီလမှ (၁၉၆၂)ခု ဧပြီလအထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်ရှိ ရှီလောင် ဆလေးရှင်း နိုဗီရှိတ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၂) မှ (၁၉၆၄) ဒီဇင်ဘာလအထိ ဘင်္ဂလားပြည် ဒါဂျီလင်မြို့နယ် ဆိုနာဒါး ဆလေးရှင်းတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၆၄)ခုတွင် ဖီလော်ဆော်ဖီ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၆၄) ခု ဒီဇင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက်၍ ဖါသာရ်လဖုန်း အထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းသားများကို စာသင်ပေးရသည်။ (၁၉၆၆) တွင် အနီးစခန်းဘရာသာရ်များကို စာသင်ပေးရသည်။ (၁၉၆၇/၆၈)တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဒူးဘန်းလမ်းရှိ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် သီအိုလိုဂျီပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၆၉) မှာ ခေတ္တ အနားယူသည်။ (၁၉၇၀) မှ (၁၉၇၄) အထိ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ် ပြန်တက်သည်။ (၁၉၇၄) ခု ဧပြီလ (၂)ရက်နေ့တွင် မုံလှရွာ၌ ဆရာတော်ကြီး အေဦးဘခင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
(၁၉၇၄) တွင် ချင်းပြည်နယ် ဟားခါး ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ ဟားခါး ကက်သလစ် ဘိုင်ဘယ် စတင် ပြုစုခဲ့သည်။ ဓမ္မသင်တန်းများ ပို့ချခဲ့သည်။ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၏ အားပေးမှုဖြင့် လူငယ်ရေးရာ ညကျောင်များ စတင် ဖွင့်ခဲ့သည်။ အောင်ချက်ကောင်း၍ နောင်တွင် ပုံမှန် ဖွင့်သွားခဲ့သည်။ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း စလယ်ဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ဖြင့် ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဆားဗစ် (English service)အစီအစဉ်ကို စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ လူကြိုက်များ၍ ယနေ့တိုင် ဆက်လက် တည်တန့် တိုးတက်နေကြောင်း သိရသည်။ လမ်းစဉ်လူငယ် ဘင်ခရာအဖွဲ့ကို ကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်း သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကလေးများနှစ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့် တွဲဖက်၍ ကလေးများအပေါ် ခရစ်ယန်ဘာသာတရား၏ အမြင် ရှုဒေါင့်ကို ဟောပြောခြင်း၊ ပြဇတ်ပြခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုဖြင့် သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန် မိသားစုနှစ်ကလည်း ခရစ်ယာန် ဂုဏ်သိက္ခာ မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ ခရစ်ယာန်များ ပူးတွဲကာ အတူ ၀တ်ပြုခြင်းများ၊ မရှိ ဆင်းရဲသား မိသားစုများအား ကူညီရမည့်အကြောင်း ဟောပြောနိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၃) ခုနှစ်တွင် မုံလှရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည် နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်မှ ကိုရင်များနှင့် ဘာသာရေး သင်တန်းများ ပို့ချပေးသည်။ လူငယ်များ ဖွဲ့စည်း၍ ကင်းစောင့်စေခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာ လုံခြုံရေးနှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖရန်စစ္စကင် သီလရှင်များနှင့် ပူးတွဲ၍ ဆေးပေးခန်းဖွင့်ခဲ့ရာ မိမိတုို့ရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာတို့မှ လူနာများအတွက် အထူး အကျိုးပြုသည်။
အိုမင်း ရင့်ရော် ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေပြီ ဖြစ်သော ဘုန်းကြီးနေကျောင်းကို ဖျက်၍ ဘုန်းကြီးနေကျောင်း အသစ်တစ်ဆောင် ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းမြို့၏ ပထမဆုံး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ကော်မရှင်၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရသည်။ ဘာသာရေး သင်တန်းများလည်း ပို့ချပေးသည်။ ဘာသာရေး စာပေမြှင့်တင်ရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်ရသည်။ "အင်းဝရောက်ခြေရာများ" စာအုပ်ကိုလည်း ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးနေကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၂)ခု ဇွန်လမှ စ၍ ချမ်းသာကုန်းရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:52 AM
(Fr. Peter U Mya Aung)
ဖါသာရ်ပီတာ ဦးမြအောင်သည် (၁၉၃၃)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် ချောင်းရိုးရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးဘရှင် ဒေါ်လန်းတို့ဖြစ်သည်။ (၁၉၄၇)ခု မေလတွင် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်သည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင်ရှိသော ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းကို ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက် (၁၉၄၈)ခုနှစ်တွင် ရွာတော်မှ ပြင်ဦးလွင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ (၁၉၅၂) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်သို့ ပညာသင်ကြားရန် စေလွှတ်ခြင်း ခံရသည်။ ပီနန်တွင် (၆)နှစ် ပညာသင်ပြီးနောက် (၁၉၅၈)ခုနှစ် ကုန်ခါနီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကိုရင်ကြီးအဖြစ်နှင့် ချင်းတောင်တန်း ဆိုင်းဇံကျေးရွာတွင် ဖါသာရ် ရုအဲလင်းလက်အောက် တနှစ်တာ လက်တွေ့သင်တန်းဆင်းရင်း ချင်းစကား သင်ယူခဲ့သည်။ (၁၉၆၀) ခု ဇန္န၀ါရီလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ဆရာတော်ကြီး ဦးဝင်း လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာ ခံပြီးနောက် ဆိုက်ဇံရွာတွင် လအနည်းငယ်နေပြီး ဆွမ်းပီးကျေးရွာသို့ ရွှေ့ပြောင်း သီတင်းသုံးခဲ့သည်။ ဆွမ်းပီးကျေးရွာ၏ ပထမဆုံးဘုန်းကြီးဟု ခေါ်ကြသည်။
ဖါသာရ်ပီတာ ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက် မည်သည့်ဘုန်းကြီးမျှ ကျောင်းမထိုင်တော့ပါ၊ ရဟန်းတော်များ နည်းပါးသွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ချင်းလူမျိုးတို့က ဖါသာရ်ပီတာကို ဆွမ်းပီးဘုန်းကြီးဟု ခေါ်ကြသည် (၁၉၆၄) မှ (၁၉၆၇) အထိ တီးတိန်မြို့တွင် သတင်းသုံးခဲ့သည်။ (၁၉၆၇) မှ (၁၉၇၇)ထိ ကလေးမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၇)ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ (၂၀၀၂)ခုနှစ် အထိ ချမ်းသာရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၇၇) ခုနှစ်တွင် ကျောင်းတောင်ဘက်ရှိ ပြိုလဲနေသောပေ (၂၅၀) ရှိ အုတ်တံတိုင်းကို အသစ်ပြန်လည် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၅) ခုတွင် ရဟန်းဝါတော် (၂၅)နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင်ပွဲတော်ကို ချမ်းသာရွာတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များ၏ လူအားငွေအားဖြင့် ၄င်းရပ်နီး ရပ်ဝေးမှ ဘာသာဝင်များ၏ အလှူငွေဖြင့် ၄င်း၊ ကျောင်း၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် သောက်ရေကန်ကြီးကို (၁၉၈၄) ခုနှစ် မေလ (၁၀) ရက်နေ့မှ စတင် တူးဖေါ်ရာ (၁၉၈၅)ခု သြဂုတ်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးသည်။
ရေဂါလံပေါင်း (၁၂၃၇၅၀၀) ဂါလံ
ရေကန်အလယ်တွင် မယ်တော်မာရိယား၏ ဆင်းတု ပလ္လင်တင်ထားသည်။ မယ်တော်ကန်ကြီးဟု အမည်တွင်သည်။ (၁၉၈၆)ခုတွင် မယ်တော်ကန်ကြီးကို ငုံ၍ မြောက်ဘက်မှ ပေ(၃၀၀)ရှိ အုတ်တံတိုင်းအသစ် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၇)တွင် အ၀ီဇိတွင်းတူးဖေါ်ရာ ကျပ်လေးသောင်းကျော် ကုန်ကျသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ (၁၉၉၂) ခုနှစ်တွင် ပေ (၃၈၀)ရှိ အ၀ီဇိတွင်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရေစင်ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၀) ခုနှစ်တွင် (၇)ခန်း (၈)ခန်းရှိ စိန်ပီတာခမ်းမဆောင်ကို အောင်မြင်စွာ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သုံးသိန်းခွဲ ကုန်ကျခံ၍ ရွာဘာသာဝင်များက ငါးသောင်းထည့်ဝင်သည်။ စိန်ပီတာရာပြည့်ခမ်းမကိုလည်း ရာပြည့်ပွဲ မကျင်းပမီ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဓမ္မာရုံဖွင့်ပွဲ ရေကန်ဖွင့်ပွဲနှင့် ရေကန်အလယ်တွင် မယ်တော်ဆင်းတုတင်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ လယ်ဧက (၁၅၀)ကို အကျိုးပြုနိုင်သော လေးဆယ်စင်းဆည်ကို ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ လယ်ဧက (၁၅၀၀)ကျော်ကို အကျိုးပြုနိုင်သော ချမ်းသာဆည်ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပူပေါင်း၍ ဆောက်လုပ်ရာ (၁၉၉၃)ခု မေလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။
(၁၉၉၂-၉၄)တွင် ဘုရားကျောင်းမှ ကျွန်းတိုင်ကြီးများ မြေ၀င်ဆွေး၍ မျက်နှာကျက်များ နိမ့်ကျလာသည်။ တိုင်ကြီးများ ဘုရားကျောင်းအတွင်း ယိုင်လာသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ချမ်းသာရွာမှ ဆရာကြီးဦးသန်းမောင်၏ သား မန္တလေးမြို့နေ အင်ဂျင်နီယာ ဦးမောင်မောင်၊ ထန်းပင်ကုန်းမှ ပန်းရံဆရာကြီး ဦးကျော်သောင်းနှင့် အဖွဲ့၊ ချမ်းသာရွာမှ လက်သမားဆရာ ဦးမြင့်အောင်နှင့် ဦးတီတိုးတို့နှင့် ပြန်လည် ပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည်။ တိုင်များ အားလုံး ဖြုတ်သည်။ ဆွေးနေသော အပိုင်းများ ဖြတ်တောက်ပြီး သံကူကွန်ကရစ် ကျောက်တိုင်ခံကာ အပေါ်ပိုင်းကို ပြန်တင်ခဲ့သည်။ လုံးဝ ဆွေးမြေ့သွားသော ကျွန်းတိုင်အတွက် အစားထည့်နိုင်ရန် ရေမျက်ရွာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးအာစရက ကျွန်းတိုင်တတိုင်လုံးကို ကိုယ်တိုင်လာရောက် လှူဒါန်းသည်။ သံကူကွန်ကရစ် ကျောက်တိုင် (၁၁)တိုင် အစားထိုးရသည်။ အုတ်နံရံကြီးများ အက်ကွဲ ဆွေးမြေ့နေသည်ကို ဖြိုချပြီး အုတ်ချပ်ရေ တစ်သိန်းသုံးသောင်းခန့် အစားထိုးလိုက်ရသည်။ လိုအပ်သောနေရာများတွင် သံကူကွန်ကရစ် ကျောက်ထုပ်ကြီးများ အစား ထည့်ရသည်။ ခေါင်းလောင်းစင်ရှိ သစ်သားဘီးဝိုင်းကြီးများ၊ ငှက်ပျောဖူးအထက် သစ်သားထိပ်ချွန်ပိုင်းမှ ငါးကျင်းကွက်များ တိုင်ကြီး တန်းကြီးများနှင့် ခေါင်းလောင်းစင်ထိပ်မှ ခရစ္စတူးတိုင်ကို အသစ်လဲခဲ့သည်။ ငှက်ပျောဖူးအထက် သစ်သားထိပ်ချွန်ပိုင်း၏ အခြေတွင် (၁၄)လက္မ ပတ်လည်ရှိ ကျွန်းတုံးများ ခံထားသည်။ ၄င်း ကျွန်းတုံးများ ဆွေးမြေ့နေပြီဖြစ်၍ သံကူကွန်ကရစ် ကျောက်ထုပ်ကြီးများဖြင့် အစားထိုး ပြုပြင်ခဲ့သည်။ မန္တလေး ဦးဆန်နီနှင့် အဖွဲ့က ဘုရားကျောင်းတစ်ခုလုံး ဆေးသုတ်သည်။ ဘုရားကျောင်းကို ဆယ်သိန်းခန့် အကုန်အကျခံ၍ ပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည်။
ချမ်းသာရွာ၌ (၁၉၉၄)ခု ဧပြီလ (၆)ရက်နေ့နှင့် (၇)ရက်နေ့များတွင် ဘုရားကျောင်း နှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ နိုင်ခဲ့သည်။ ချမ်းသာရွာတွင် ဖါသာရ်ဘူးလီးရက်စ် လက်ထက်ကစပြီး အစိုးရအသိအမှတ်ပြု မူလတန်းကျောင်း ရှိခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ပေလေးတီးယားလက်ထက် (၁၉၂၁)ခုတွင် မူလတန်းကျောင်းမှ အစိုးရအသိအမှတ်ပြု အာရ်စီအမ် အလယ်တန်းကျောင်း အဖြစ် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ဖါသာရ်လေအိုလက်ထက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် အလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်မှ မူလတန်းအဆင့်သို့ ပြန်လည် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ဖါသာရ်မိုးဇယ် လက်ထက် (၁၉၅၅) တွင် အလွတ်ပညာသင်ကျောင်း ဖွင့်၍ အလယ်တန်း ပညာ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ (၁၉၆၄)ခုမှစ၍ တွဲဖက် အလယ်တန်းကျောင်းဖွင့်၍ ပညာ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ရှေးယခင်ကစ၍ စာသင်ကျောင်းသည် ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ရှိခဲ့သော်လည်း ဖါသာရ်ပီတာ လက်ထက် (၁၉၈၀)မှ စ၍ ရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် တွဲဘက် အလယ်တန်းကျောင်းရှိရာ သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။ (၁၉၈၅) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)၇က်နေ့မှစ၍ မူလတန်းအဆင့်မှ အလယ်တန်းအဆင့်သို့ ပြန်လည် တိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ (၂၀၀၁)ခုနှစ်တွင် စာသင်ခန်း (၈)ခန်းပါသည့် လေးခန်းတွဲ နှစ်ထပ် နံကပ်သွတ်မိုး စာသင်ကျောင်းတစ်ဆောင်ကို ကာရီတာစ်မန္တလေး၏ အကူအညီမှုဖြင့် ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ပီတာမြအောင်သည် (၂၀၀၂)ခု ဇွန်လမှစ၍ စစ်ကိုင်းမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အမှုထမ်းရသည်။
ဖါသာရ် အာသာနာစီအူးစ်-ဦးခင်မောင် (၁၉၃၆-၁၉၉၈)
(Fr. Athanasias- U Khin Mg)
ဖါသာရ် အာသာနာစီအူးစ် ဦးခင်မောင်သည် (၁၉၃၆)ခု မေလ(၂)ရက်နေ့တွင် တန်ဆည်မြို့နယ်၊ ချောင်းရိုးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဘများမှာ ဆရာကြီး ဦးရင်မောင်နှင့် ဒေါ်ညိုတို့ဖြစ်သည်။ ချောင်းရိုးရွာတွင် မူလတန်းပညာ သင်ယူပြီး (၁၉၄၇)ခုနှစ်တွင် ဖါသာရ်ပီတာမြအောင်နှင့် အတူ ရွာတော်ရွာ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ (၁၉၄၈)ခုနှစ်တွင် ပြင်ဦးလွင်သို့ ရောက်ရှိပြီး (၁၉၅၂)ခုတွင် စိန်အာလ်ဘက် အထက်တန်းကျောင်းတွင် သတ္တမတန်း၌ စတင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ (၁၉၅၅)ခုနှစ်တွင် မက်ထရစ်အောင်သည်။ (၁၉၅၆)ခုတွင် မလေးရှားပြည် ပီနန်ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားပြီး (၁၉၆၁)ခု ဒီဇင်ဘာလတွင်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ (၁၉၆၂) ခု ဇန္န၀ါရီလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ဆရာတော်ဂျိုဇက်ဦးဝင်း လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
သိက္ခာခံပြီးနောက် တောင်ပိုင်း ချင်းတောင်မင်းတပ်နယ် လေးစီးယန်းရွာကလေးတွင် သာသနာလုပ်ငန်း စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၅)တွင် ခမ်းပတ်ရွာသို့ ခေတ္တပြောင်းရွှေ့ရသည်။ ထိုနောက် မြောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ် ဖလန်းသာသနာ ဘာသာဝင်များကို (၁၉၆၅)ခုမှ (၁၉၇၁)ခုနှစ်အထိ ကြည့်ရှုခဲ့သည်။(၁၉၇၁) ခုနှစ်မှ (၁၉၈၀)ခုနှစ်အထိ ပြင်ဦးလွင် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း၊ ကျောင်းအုပ်အဖြစ်၎င်း၊ (၁၉၈၀) မှ (၁၉၈၃)ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန် မေဂျာရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း ကျောင်းအုပ်အဖြစ်၎င်း အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၈၃) ခုနှစ် (၁၉၈၈)ခုနှစ်အထိ ရွှေဘို ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးအဖြစ်နှင့် ရွာတော်ဘာသာဝင်များကိုပါ ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။
ဖါသာရ်စီအူးစ် ဦးခင်မောင်သည် ကိုယ်တိုင်အုတ်ဖုတ်၍ ရွာတော်ကျောင်းဝင်း လုံခြုံရေးအတွက် ဖါသာရ်ဇေးဗီးယား လက်ထက်က မကာနိုင်ဘဲ ကျန်ခဲ့သော အပိုင်းအားလုံးကို အုတ်တံတိုင်းကာခဲ့သည်။ သင်္ချိုင်းကိုလည်း အုတ်တံတိုင်းကာခဲ့သည်။ ရွာထဲ၌ လူများ ပြည့်ကျပ်နေသဖြင့် ကျောင်း၏ မြောက်ဘက် အရှေကဘက်နှင့် တောင်ဘက်များတွင် သာသနာလယ်မြေများကို ရွာမြေ အဖြစ် တိုးချဲ့ပြီး အိမ်ပူး အိမ်ကပ်များကို နေရာချထားပေးခဲ့သည်။ ရွာ၏ တောင်ဘက်ရှိ ရွှေဘို ညောင်ပင်သာကားလမ်းနှင့် ရွာတော်ရွာ ဆက်သွယ်သော လမ်းသစ်ဖေါက်ရန် မန္တလေးသာသနာပိုင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်အာလ်ဖုန်း ဦးသန်းအောင်က ငွေကျပ်တစ်သောင်း မတည်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းမတည်ငွေဖြင့် ရွာတောင်ဘက်ရှိ လယ်ယာမြေအချို့ကို ၀ယ်ယူပြီး လမ်းသစ် ဖေါက်လုပ်ခဲ့သည်။ လမ်းဖေါက်ရာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် ကောင်စီဥက္ကဌတို့ ဦးစီးကာ ရွာသူရွာသားများက မခိုမကပ် လုပ်အားပေးကြသဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဘောလုံးကွင်းအနီး အ၀ီစိ ရေလျှံတွင်း(၂)တွင်း တူးဖေါ်ခဲ့သည်။ ပြည်တော်သာကန်ကို တိုးချဲ့တူးဖေါ်၍ ဘုန်းတော်ကြီး၏ ဂျူဘလီ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ဂျူဘလီကန်ဟုသမုတ်ခဲ့သည်။ ဟောခန်းမလည်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ရွှေဘိုမြို့တွင် ဟောခန်းမနှင့် ခေါင်းလောင်းစင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၈)ခုနှစ် မေလ (၃၁)ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုမြို့၌ ပျံတော်မူသည်။ ဖါသာရ်စီအူးသည် ရွှေဘိုမြို့၌ ပေ(၇၀)အမြင့်ရှိသော ခေါင်းလောင်းစင်ကို ငွေကျပ်တစ်သိန်း ခုနှစ်သောင်း အကုန်အကျခံ၍ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
(Fr. Xavier- U Myo Myint)
ဖါသာရ်ဇေးဗီးယား ဗန်ဒယ်ရင် ဦးမျိုးမြင့်သည် (၁၉၂၄)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၉)ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဘနှစ်ပါးမှာ ပက်ထရစ်ဗန်ဒယ်ရင်နှင့် စီစီလျားပရာဂိုဆပ်တို့ ဖြစ်သည်။ (၁၉၅၅)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင် ကျောင်းဝင်သည်။ ထိုနောက် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက်ပညာသင်ကြားပြီး (၁၉၆၄)ခု ဧပြီလ (၈)ရက်နေ့တွင် ရဟန်းသိက္ခ ခံယူသည်။ ထိုနောက် ချောက်မြို့တွင်၎င်း၊ ချင်းပြည်နယ် လူရှဲတွင်၎င်း၊ သာသနာအမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၅) မှ (၁၉၈၃) ခုနှစ်ထိ ရွှေဘို ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ရွာတော်ရွာကိုလည်း ကြည့်ရှုရသည်။ ဖါသာရ်ဇေးဗီးယားသည် (၁၉၈၃)ခုတွင် ရွှေဘိုမြို့၌ လူဒယ်သခင်မဂူလှိုင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဇေးဗီးယားဗန်ဒယ်ရင်သည် ဖါသာရ်စခရီးဗင်း ဖျက်သွားသော ရွာတော် ဘုရားကျောင်း ခေါင်းလောင်းစင်မှ ငှက်ပျောဖူးကို သားသတ်လိုင်စင်မှ ရသော အမြတ်ငွေဖြင့် ပြန်လည် တပ်ဆင်ပြုပြင်သည်။ လျှပ်စစ်မီးများလည်း ပြန်လည် တပ်ဆင်၍ နေ့စဉ် မီးပူဇော်သည်။ ဖါသာရ်ဇေးဗီးယား၏ ဟောပြောမှုကောင်းသဖြင့် ရွာသူရွာသား တကာတကာမများက ယေဇူးရွှေနှလုံးတော် ဆင်းတု၊ မိုးဇယ် ဆင်းတု၊ ဧလိယ ဆင်းတု၊ စိန်ပီတာ ဆင်းတု၊ ယေဇူးအဆင်း သဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပုံဆင်းတု၊ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် ဆင်းတု၊ စိန်ပီတာ ဆင်းတု၊ ယေဇူးအလောင်းတော်ကို မယ်တော်ပွေ့ထားသော ဆင်းတု၊ စိန်မာသား ဆင်းတုစသည့်များကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရွာတော်လူငယ်များ ခရစ္စမတ်သီချင်းဆို ထွက်ရာမှရရှိလာသော အလှူငွေများဖြင့် ကျောင်းဝင်းကို (၁၀)ခန်းလောက် အုတ်တံတိုင်းကာခဲ့သည်။ ကျောင်းဝင်းတခါးမကြီးကို ဦးထွန်းခင် ဒေါ်ခင်မာမာမြင့်တို့က လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဇေးဗီးယားလက်ထက် ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် ရဟန်းအမတ်ကြီး ကာဒီနယ် ကာစီဒီ ရွှေဘိုမြို့နယ်ရှိ ဘာသာဝင် ကျေးရွာများသို့ ဆရာတော်ကြီး အာလောရှက်ဦးဘခင်၊ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးသန်းအောင်တို့နှင့် လှည့်လည်ကြရာ ရွာတော်ဘာသာဝင်များက အိုးစည် ဗုံမောင်း အကမျိုးစုံဖြင့် သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြသည်။
ဖါသာရ် ဇေးဗီးယားသည် (၁၉၈၃)ခုနှစ်မှ (၁၉၈၉)ခုနှစ် အထိ ချောင်းရိုးကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီးအဖြစ်နှင့် ချောင်းရိုး၊ ရေဦး ညောင်ကိုးပင်နှင့် လမ်းဆုံဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ချောင်းရိုးတွင် ဟောခန်းမကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၉) မှ (၂၀၀၁) အထိ မြင်းခြံဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဇေးဗီးယား ဗင်ဒါရင်သည် (၂၀၀၁)ခုနှစ် မေလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံ၌ ပျံတော်မူသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 5:44 AM